Miala amin’ny fanompoana fanahy hafa, mankamin’ny fahamarinana (2)
"Ho amin’ny fahafahana no nanafahan’i Kristy antsika; ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin’ny zioga fanandevozana intsony." Galatiana 5:1
«Raha te hahita ny mazava ny olona, dia matetika no tsy maintsy mianjera ao anaty lavaka lehibe aloha. Dia tsapany, rehefa mijery an’Andriamanitra izy, fa diso lalana ary afaka mahafantatra ny fahasoavan’Andriamanitra. Izany no nitranga tamiko.
Telo volana tat? aoriana aho dia niova fo, ary nametraka teo anatrehan’ny Tompo ny fahotana nanavesatra ahy ka tsy zakako intsony. Nahatsapa ho toy ny sempotsempotra aho, mandra-pahatongan’ny andro namelan’ny Tompo ny heloko. Tena nanenina mafy aho, tao am-poko. Fahasoavan’ny Tompo no amelany antsika hahatsapa ny fahotantsika, ary ny fahasoavany irery ihany no mahavonjy.
Niova tanteraka ny fijeriko izao tontolo izao, sy ny olona, ary ny fiainako. Nampahiratin’ny Tompo ny masoko. Izy no Mpiandry ahy, ka tsy hanan-java-mahory aho, araka ny voasoratra ao amin’ny Salamo 23. Nanomboka teo, dia nosedrain’Andriamanitra ny finoako, teo amin’ny sehatra maro. Nifanandrina matetika tamin’ny fanompoana fanahy hafa aho, ka nijoro miharihary ho vavolombelon’ny finoana kristiana, vavolombelon’ny loza ateraky ny fanompoana fanahy hafa, ary vavolombelon’ny fandresen’i Jesosy Kristy. Miresaka izany rehetra izany aho, mba hahatsapana ny herin’ny maizina sy ny fangejany ny olona. Fa mahazendana kosa ny mahatsapa ny hery tsitoha ananan’Andriamanitra, rehefa manafaka antsika Izy! Very aho, fadiranovana, ary tena andevon’ireny zavatra rehetra ireny fahiny! Ankehitriny kosa, dia afaka miaina aho, afaka tamin’ny fanompoana fanahy hafa, noho Jesosy Kristy Mpamonjiko, Izay ekeko ho Tompoko koa.»